Semalt विशेषज्ञ -7हुनुपर्दछ वर्डप्रेस प्लगइन प्रकारहरू
हामी यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि २%% भन्दा बढि वेबसाइटहरू र ब्लगहरू WordPress द्वारा संचालित हुन्छन्, यसलाई उत्तम सामग्री प्रबन्धन अनलाइन बनाउँदै। त्यस्तो समयहरू थिए जब ब्ल्गर डॉट कॉम सामग्री मार्केटर्स र लेखकहरूको लागि मात्र विकल्प थियो, तर अब वर्डप्रेस व्यापक रूपमा प्रयोग र मनपर्‍यो किनभने यसको साइटको कार्यक्षमता विस्तार गर्ने क्षमताको कारण। सरल शब्दहरूमा, तपाई सजिलैसँग आफ्नो WordPress साइटमा सयौं हजार प्लगइनहरू थप्न सक्नुहुनेछ र यसको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। प्लगइनहरूले प्रोग्रामर र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि ब्यबसायिक वेबसाइट निर्माण र मर्मत गर्न सजिलो भएको छ। वेबसाइट सुरू गर्न तपाईंलाई कुनै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन किनकि तपाईंको काम सजिलो र छिटो बनाउनको लागि WordPress प्लगइनहरू छन्। केही वर्डप्रेस प्लगइनहरूले वेबसाइट वा ब्लग ट्राफिक बढाउन मद्दत गर्दछन् जबकि अन्यले रूपान्तरण दर सुधार गर्न र बाउन्स दर घटाउन मद्दत गर्दछ।
ओलिभर किंग, Semalt डिजिटल सेवा को एक अग्रणी विशेषज्ञ,7मुख्य प्रकारको WordPress प्लगइनहरु को बारे मा थाहा हुनु पर्दछ।
१ क्याच गर्दै
क्याचिंग तपाईको अनलाइन व्यावासायको लागि उत्तम र प्रख्यात पक्षहरू मध्ये एक हो। यसले अत्यन्त तपाईंको वेब पृष्ठहरूको लोडिंग समय घटाउन सक्छ र उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव प्रस्ताव गर्न सक्छ। साथै, यसले तपाईंलाई कसरी तपाईंको साइटको बाउन्स दर घटाउने सुझाव दिन्छ र खोजी ईन्जिनहरूमा विशेष गरी गुगलमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। तपाईंको साइट लोड छिटो, उच्च र राम्रो यसको खोज इञ्जिन दर्जा छ। यो कुनै आश्चर्यको रूपमा आउनु हुँदैन कि आगन्तुकहरू तपाइँको साइटबाट टाढा नेभिगेट गर्न रुचाउँछन् यदि यो पाँच सेकेन्डमा लोड हुँदैन। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो साइटको लोडिंग गति सही प्रकारको प्लगइनहरूको साथ सुधार गर्नुपर्नेछ। यद्यपि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, तर उत्तम वर्डप्रेस प्लगइनहरू W3 कुल क्यास र WP सुपर क्याच हुन्।
२. सदस्यता विकल्प
तपाईंले सुन्नु भएको छ कि पैसा सबै मेलमा छ। यो त्यस्तै हो जुन सफल उद्यमीहरू विश्वास गर्छन्। ग्राहकहरूको विशाल सूचीले तपाईंलाई तपाईंको ब्यापार द्रुत दरमा बढाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई बिक्री बिक्रीको भार प्राप्त गर्न सक्दछ। यसले वेबमास्टर्सलाई उनीहरूको साइटहरू र ब्लगहरूमा द्रुत रूपमा फर्कने आगन्तुकहरू पनि दिन्छ। तपाईंको वर्डप्रेस साइट को लागी सबस्क्रिप्शन प्लगइनहरू न्यूजलेटर साइन-अप र WP सब्सक्राइबर प्रो हो।
यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा जैविक ट्राफिक चलाउन चाहानुहुन्छ वा खोजी ईन्जिन रैंकिंग सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले एसईओको लागि तपाईंको वेब पृष्ठहरू अप्टिमाइज गर्नुपर्नेछ। मेटा शीर्षक, विवरण र मेटा ट्याग म्यानुअल रूपमा थपेमा धेरै व्यस्त र चिन्ताजनक छ, तर तपाईंको साइटमा प्लगइनहरू एकीकृत गर्नाले मैन्युअल इच्छा हटाउनेछ र तपाईंलाई कुनै समय बिना सान्दर्भिक जानकारी थप्न मद्दत गर्दछ। यस सम्बन्धमा सब भन्दा राम्रा र प्रख्यात WordPress प्लगइनहरू Yoast, One SEO Pack, र SEO Ultimate द्वारा WordPress SEO हो।
तथ्यको कुराको रूपमा, सबै वेबमास्टरहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटको रैंकिंगको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ। तपाईंको ट्राफिकको गुणस्तरको बारेमा कुनै सही ज्ञान बिना, तपाईं कहिले पनि सही मार्केटिंग निर्णय लिन सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो साइट एकीकृत गर्नुपर्नेछ र यसमा एनालिटिक्स उपकरण जस्ता गुगल एनालिटिक्स स्थापना गर्नुपर्नेछ। Jetpack साथ पनि राम्रो छ किनकि यो तपाईं को लागी कुनै भ्रम पैदा नगरी सही डाटा हुन्छ।
Land. ल्यान्डि Pages पृष्ठहरू
ल्यान्डि pages पृष्ठहरूले रूपान्तरण दर सुधार र बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यदि तपाईं अतिरिक्त बिक्री पोषण गर्न चाहानुहुन्छ भने सामग्री मार्केटि social, सामाजिक मिडिया मार्केटि,, र ईमेल मार्केटि to, तपाईंले प्रभावकारी ल्यान्डि pages पृष्ठहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। एउटा अवतरण पृष्ठले तपाईंको न्यूजलेटरहरूको लागि साइन अप गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वस्त गर्न सक्छ र खरीदहरू सम्भव बनाउँदछ। वर्डप्रेसमा, त्यहाँ विभिन्न प्लगइनहरू छन् तपाईंलाई जबरजस्ती ल्यान्डिंग पृष्ठहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न, तर ल्यान्डिing पृष्ठहरू, जेडिटी र अप्टिमाइज प्रेस २.० उत्तम हुन्।
Related. सम्बन्धित र प्रसिद्ध पोष्टहरू
लगभग सबै वेबमास्टरहरू उच्च बाउन्स रेटको समस्याको साथ संघर्ष गर्छन्। प्रयोगकर्ताहरू तपाइँको वेबसाइटमा आउँदछन्, सामग्री पढ्नुहोस्, मनपराउँनुहोस् र साझेदारी गर्नुहोस्, र अन्य साइटहरूमा नेभिगेट गर्नुहोस्। यो तब हुन्छ जब तपाईं आफ्नो कथा प्रभावशाली ढ tell्गले बताउनुहुन्न। एक आगन्तुक तपाइँको वेबसाइट मा तीन सेकेन्ड भन्दा अधिक खर्च गर्दैन र तपाइँले राम्रो खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण को लागी बाउन्स दर घटाउनु पर्छ। सबैभन्दा प्रसिद्ध वर्डप्रेस प्लगइनहरू जुन तपाईंको साइटमा लोकप्रिय वा सम्बन्धित पोस्टहरू थप्न सक्दछन् ती हुन् वर्डप्रेस सम्बन्धित पोष्टहरू, र अन्य सम्बन्धित पोष्टहरू प्लगइन।
Social. सोशल मिडिया एकीकरण
सामाजिक मिडिया साइटहरूले हामीलाई अनलाइन मार्केटिंगमा धेरै मद्दत गर्दछ। लगभग सबै वेबसाइटहरू सामाजिक नेटवर्कबाट यातायात ड्राइभिंगमा केन्द्रित छन्। फेसबुक र ट्विटर प्रयोग गरी नब्बे प्रतिशत भन्दा बढि व्यक्तिसँग परिवार र साथीहरूसँग कुराकानी गर्न, सामाजिक मिडिया प्लगइनहरू उनीहरूलाई स using्लग्न बनाउन भन्दा राम्रो अरू के नै छैन। यस सन्दर्भमा उत्तम WordPress प्लगइनहरू परम सामाजिक डिक्स, फ्लोटिंग सोशल बार, र सामाजिक लिंकहरू हुन्।